भात पकाउन सकिएन, ढिँडो खाऊँ ! « News of Nepal
आमजनताको हितमा व्यापक काम भएको भए, ओलीको अधिनायकवादी कदमका समर्थक पनि भेटिने थिए । कोरोना महामारीको बीचमा पनि गौरीफण्टा, रुपैडिया, रक्सौल, सुनौली आदि नाकामा नेपाली नागरिकहरु पराजित मुखाकृतिका साथ झुत्रो र मैलो पहिरनमा काम खोज्दै भारततिर भीडमभीड गरेर जान लागेका देखिए, देखिइरहेका छन् तर त्यस दृश्यले ओली सरकारलाई पोलेन । नेपालीहरु महामारीमा परेको बेला औषधि उपचारमा भ्रष्टाचार भयो, तर ओली सरकारलाई छोएन । सानादेखि ठूला राजनीतिक नियुक्तिमा अर्बौं चन्दा लिने काम ओली स्वयंले गरेको प्रमाण छताछुल्ल भयो तर भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने नारामात्र फलाकियो, व्यवहारमा निश्छलता आएन । के यस्तो मानसिकताका ओलीले उनले घोषणा गरेजस्तै वैशाख महिनामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउलान् ? र, गरे पनि त्यो स्वच्छ होला ? आज देशका सबैजसो दलहरूले यसको विरोध र निन्दा गर्दै सडक आन्दोलन गरी संसद्को पुनःस्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रम ओलीको यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरू परेका छन् र त्यसउपर सर्वोच्चमा बहस पैरवी पनि भइरहेको छ । अब यसको भविष्य के हुन्छ ? यो दलहरूको आन्दोलन र सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि मुख्य गरी दलहरूको आन्दोलनमा भर पर्छ । त्यो किनभने सर्वोच्च अदालत पनि यही प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाकै एउटा मुख्य अङ्ग भएकाले यसविरुद्ध केही गरिहाल्छ भन्न सकिने आधार नभएको राजनीतिज्ञहरुको टिप्पणी छ ।